Published in Video သတင်း August 06 2020	0
Published in ဆောင်ရွက်မှုသတင်းများ August 06 2020	0
လမ်းမိုင်အရှည် - ၇၅ မိုင် (မိုင်တိုင် ၄၀ မှ မိုင်တိုင် ၁၁၅ ထိ)
လမ်းအမျိုးအစား - AC (Bituminous Concrete)
Pavement Width -7meters
Shoulder - 2.5 meters (2 sides)
Formation width - 12 meters
Right of way - 70 meters
တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည့် အဖွဲ့အစည်း - National Highways Authority of India (NHAI)
Contract Co.,Ltd - PLL-VIL Company Limited & M/S Varaha Infra Company Limited
Bid Price of Rs - 1177,00,00,000/s- (Rs. One Thousand One Hundred Seventy Seven core only)
လက်ရှိဆောင်ရွက်မှု - ၁၀/၂၀၁၈ မှ စတင်၍ km(0-112.141)အထိ 112.141 km အတွင်း လမ်းလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Project Name - Upgradtion of Yagyi-Kalewa section Milepost 40/0 to 115/5 in Myanmar to2Lanes with Eathern Shoulder on EPC mode
Project Cost - INR 1177 Cr.
Length - 112 km, 237 realignments and grade correction
Construction period - 1096 Days (3 years)/ Maintenance (5 years)
Client - National Highways Authority of India (NHAI)
Funding Agency - Aid provided by the Government of India
Type of Pavement - flexible Pavement (Design period of 15 years)
Road Improvement number of locations = 237 no's
ROW - 70 meters
Major junctions - 1 no's
Minor junctions - 24 no's
EPC contractor - M/s PunjLlyod - Varaha Infra Ltd (JV)
Authority Engineer - M/s Rodic Consulting Engineers
Signing of Contract Agreement - 13 April 2018
Appointed Date - 28 May 2018
Construction period - 1096 Days (3 years)
Video URL: https://www.facebook.com/MinistryofConstruction/videos/2724068227862143/
Published in တင်ဒါကြော်ငြာများ August 06 2020	0
Published in နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ July 22 2020	0
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် ရေကြီး၊ ရေလျှံနှင့် မြေပြိုမှုများကြောင့် အရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်း၏ ၂၀၁၈ (Mini Budget)မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းနှင့်အသုံးစရိတ်များ စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ချက် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။